နားခိုရာ: Merry X'mas 2008
Posted by little moon at 1:37 PM
ဒီတစ်ခေါက် မိန်းမပါတယ်။ အဆူမခံရတော့ဘူး။ …
အကျီက သိတ်မိုက်တာဘဲ. သားသား…သား..သားလေး...သားသားလေးနဲ့ လိုက်မှ လိုက်..သားကလဲလေ...ချောမှချော...
သားလေးက Ann Geddes ထဲက ကလေးလေးတွေနဲ့ တူတယ်။ How lucky you are?
လေးလသားက တအားထွားတာပဲ။ သားလေးက ရီနေရင် ပိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ်.. :)
စုစံနဲ့လည်း အဲ့ ဒီအင်းကျီလေးက ချစ်စရာသိပ်ကောင်းတယ်။ ခု ထွန်းလင်းထွန်းနဲ့ကလည်း အံကိုက်ပါလား။ ကိုဇော်မိုး anniversary မှာ မုန့်ဟင်းခါးကျွေးတယ်ထင်တယ်။ မစားလိုက်ရတာ နာတာပဲ ဟီးဟီး.. သူတို့ အိမ်က ချက်တာဆို ကောင်းတယ်။